Mabasa 19 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
19 Zvino Aporo+ paakanga achiri muKorinde, Pauro akapfuura nomumativi ari mukati menyika, akaburukira kuEfeso,+ akawana vadzidzi;
2 akati kwavari: “Makagamuchira mudzimu mutsvene+ here pamakava vatendi?” Ivo vakati kwaari: “Aiwa, hatina kumbonzwa kana kuine mudzimu mutsvene.”+
3 Iye akati: “Saka, makabhabhatidzwa nei?” Ivo vakati: “Norubhabhatidzo rwaJohani.”+
4 Pauro akati: “Johani akabhabhatidza norubhabhatidzo rwokuratidza kupfidza,+ achiudza vanhu kuti vatende mune uya akanga achizouya shure kwake,+ kureva muna Jesu.”
5 Pavakanzwa izvi, vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu.+
6 Pauro paakaisa maoko ake+ pavari, mudzimu mutsvene wakauya pavari, vakatanga kutaura nendimi uye kuprofita.+
7 Vose pamwe chete, vaiva varume vanenge gumi nevaviri.
8 Achipinda musinagogi,+ akataura noushingi kwemwedzi mitatu, achikurukura uye achivanyengetedza pamusoro poumambo+ hwaMwari.
9 Asi vamwe pavakaomesa mwoyo, vasingatendi,+ vachitaura zvakaipa pamusoro peNzira Iyi+ pamberi pevanhu vazhinji, akabva kwavari+ akabvisa vadzidzi kwavari,+ achikurukura zuva nezuva muimba huru yechikoro chaTirano.
10 Izvi zvakaitika kwemakore maviri,+ zvokuti vose vaigara muruwa rweEzhiya+ vakanzwa shoko raShe, vaJudha nevaGiriki.
11 Mwari akaramba achiita mabasa anoshamisa esimba nemaoko aPauro,+
12 zvokuti kunyange machira maduku nemaepuroni zvaibva pamuviri wake zvichienda kuvanhu vanorwara,+ uye zvirwere zvakabva pavari, midzimu yakaipa ikabuda.+
13 Asi vamwe vevaJudha vaingofamba-famba, vaiva netsika yokudzinga madhimoni+ vakaedzawo kutaura zita raShe Jesu+ pane vaya vaiva nemidzimu yakaipa, vachiti: “Ndinokurayirai+ kwazvo ndichishandisa Jesu anoparidzwa naPauro.”
14 Zvino kwaiva nevanakomana vanomwe vomumwe munhu ainzi Skevha, mupristi mukuru wechiJudha, vaiita izvozvi.
15 Asi uchipindura, mudzimu wakaipa wakati kwavari: “Jesu ndinomuziva+ uye Pauro ndinomuziva;+ asi imi ndimi vanaani?”
16 Naizvozvo munhu aiva nomudzimu wakaipa akavasvetukira,+ akavakurira mumwe pashure pomumwe, akavakunda, zvokuti vakatiza mumba imomo vasina kupfeka uye vakuvadzwa.
17 Izvi zvakazivikanwa nevanhu vose, vaJudha nevaGiriki vaigara muEfeso; uye vose vakabatwa nokutya,+ uye zita raShe Jesu rakaramba richikudzwa.+
18 Vazhinji vevaya vakanga vava vatendi vaiuya vachireurura+ uye vachitaura pachena mabasa avo.
19 Chokwadi, vazhinji vevaya vaiita zvemashiripiti+ vakaunganidza mabhuku avo, vakaapisa pamberi pevanhu vose. Vakaverenga pamwe chete mutengo wao, vakawana kuti aikosha masirivha ane zviuru makumi mashanu.
20 Nokudaro shoko raJehovha rakaramba richikura nesimba uye richikunda.+
21 Zvino zvinhu izvi pazvakanga zvapera, Pauro akafunga mumwoyo make kuti, pashure pokunge aenda nokuMakedhoniya+ neAkaya, aizoenda kuJerusarema,+ achiti: “Kana ndasvika ikoko ndinofanirawo kuona Roma.”+
22 Naizvozvo akatuma vaviri vevaimushumira kuMakedhoniya, Timoti+ naErasto,+ asi iye akambononoka kwenguva yakati ari muruwa rweEzhiya.
23 Panguva iyoyo chaiyo pakava nenyonganyonga+ huru pamusoro peNzira Iyi.+
24 Nokuti mumwe murume ainzi Dhemetriyo, mupfuri wesirivha, aiwanisa mhizha pfuma zhinji+ nokugadzira tutemberi twesirivha twaAtemisi;
25 uye akaunganidza ava nevaya vaigadzira zvinhu zvakadaro,+ akati: “Varume, munonyatsoziva kuti tinobudirira nebasa iri.+
26 Uyewo, munoona nokunzwa kuti Pauro uyu akanyengetedza sei boka guru revanhu, akaita kuti vave nedzimwe pfungwa, kwete muEfeso+ chete asi munenge mumaruwa ose eEzhiya, achiti vaya vakagadzirwa nemaoko+ havasi vanamwari.
27 Zvakare, ngozi iripo haisi yokuti basa redu iri harizoremekedzwi chete asiwo kuti temberi yamwarikadzi mukuru Atemisi+ ichaonekwa sepasina uye kunyange ukuru hwake hunonamatwa noruwa rwose rweEzhiya nenyika inogarwa hwava kuda kugumiswa.”
28 Vachinzwa izvi uye vachitsamwa kwazvo, varume vacho vakatanga kushevedzera, vachiti: “Atemisi wevaEfeso mukuru!”
29 Naizvozvo guta rakazara nenyonganyonga, uye vakamhanyira munzvimbo yemitambo nomwoyo mumwe, vakatora nechisimba Gayo naAristako,+ vaMakedhoniya, vaifamba pamwe chete naPauro.
30 Kana ari Pauro, akanga achida kupinda mukati maiva nevanhu, asi vadzidzi havana kumubvumira.
31 Kunyange vamwe vevakuru vakuru vezviitiko nemitambo, vaaishamwaridzana navo, vakatumira shoko kwaari, vakatanga kumuteterera kuti arege kuzviisa pangozi munzvimbo yemitambo.
32 Chokwadi ndechokuti, vamwe vakanga vachishevedzera chinhu chimwe vamwe chimwe;+ nokuti ungano yakanga yakanyongana, uye voruzhinji vavo havana kuziva nei vakanga vaungana.
33 Naizvozvo vari pamwe chete vakabudisa Arekizanda muboka revanhu, vaJudha vachimusundira mberi; asi Arekizanda akavaninira noruoko rwake uye akanga achida kutaura kuti azvidzivirire kuvanhu.
34 Asi pavakaziva kuti akanga ari muJudha, vose vakashevedzera pamwe chete zvavakazhambatata anenge maawa maviri vachiti: “Atemisi wevaEfeso mukuru!”+
35 Pakupedzisira, munyori wezvaiitika muguta paakanga anyaradza+ boka revanhu, akati: “Vanhu veEfeso, chokwadi munhu upi asingazivi kuti guta revaEfeso ndiro rinochengeta temberi yaAtemisi mukuru nomufananidzo wakadonha uchibva kudenga?
36 Naizvozvo zvinhu izvi zvazvisingarambiki, zvakakodzera kuti murambe makadzikama musingapapariki.+
37 Nokuti mauya nevarume ava vasiri makororo etemberi kana vanhu vanomhura mwarikadzi wedu.
38 Naizvozvo kana Dhemetriyo+ nemhizha dzaainadzo vaine mhosva nomumwe munhu, mazuva edare+ aripo uye kune vatongi voruwa;+ ngavamhan’arirane.
39 Asi, kana paine chinhu chinopfuura izvozvo chamuri kutsvaka, chinofanira kusarudzwa pakuungana kuri pamutemo.
40 Nokuti chokwadi tiri pangozi yokupomerwa mhosva yokumukira pamusoro pezvaitika nhasi, pasina kana nechinhu chiripo chichatibvumira kupa chikonzero chemhirizhonga iyi.”
41 Paakanga ataura zvinhu izvi,+ akaendesa ungano yacho.+